ရှုပ်ထွေးသောရုပ်ပြဇာတ်ကားများကိုကြည့်ရှုစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်ကွန်ယက်များ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ် (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Complex ခေါ်ဆောင်သွား Movie, အခမဲ့ကြည့်ရှုစဉ်တွင်းဦးနှောက်ကွန်ယက်: Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ်နယူး Insights (2014)
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014 သြဂုတ် 15;9(8): e105336 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0105336 ။ eCollection 2014 ။
Cera N ကို1, di Pierro ED2, Ferretti တစ်ဦးက1, Tartaro တစ်ဦးက1, Romani GL1, Perrucci MG1.
Published: သြဂုတ်လ 15, 2014
Psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လူ့အချက်များမှလွှမ်းမိုးသို့မဟုတ်သီးသန့်ကြောင့်လုံလောက်သော penile စိုက်ထူမှီဖို့ persistent သို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ယခင် fMRI လေ့လာမှုများခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖို့ related အဆိုပါလိင်စိတ်နိုးထနှင့် penile စိုက်ထူခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ဘုံဖြစ်ပျက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် psychogenic ED လူနာ (EDp) တွင်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုအဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အချို့လေ့လာမှုများမဟုတ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းစုဆောင်း fMRI လှုပ်ရှားမှုလွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ICA) နဲ့နှင့်ရရှိလာတဲ့ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုယခင်ကျိန်းဝပ်ပြည်နယ် neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောထုံးစံ၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြသခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အနေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားသောဗီဒီယိုကလစ်အခမဲ့ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းမြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက် fMRI သုံးပြီးကျန်းမာတဲ့ထိန်းချုပ်မှု (HC) ကိုနှိုင်းယှဉ် EDp အတွက်ဦးနှောက်ကွန်ရက်များပြုပြင်မွမ်းမံစုံစမ်းစစ်ဆေး။ တဆယ်ခြောက် EDp ကိုး HC RigiScan အကဲဖြတ်, စိတ်ရောဂါ, နှင့်အထွေထွေဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ပြီးနောက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေနှင့် ICA EDp နှင့် HC ဖြတ်ပြီး Spatial တသမတ်တည်းခဲ့အမြင်အာရုံကွန်ရက် (VN), default အ-mode ကိုကွန်ရက် (DMN), နံရံပစ်ကစားနည်း-parietal ကွန်ရက် (FPN) နှင့် salience ကွန်ရက် (SN) ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်အကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါ DMN နှင့် SN အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ DMN ခုနှစ်, EDp, ထိုယုတ်ညံ့ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်ချိတ်ဆက်မှုတန်ဖိုးများယုတ်လျော့ posterior cingulate cortex နှင့် SN အတွက်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ဆက်သွယ်မှုအသီးသီးလက်ျာ insula နှင့် anterior cingulate cortex အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်သော်လည်း, prefrontal cortex medial ပြသခဲ့သည်။ အခ်ါ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုများ၏လျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့်အဓိကအားအနာဂတ်ကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဖွင့်အခြားလုပ်ရပ်များ၏ရှုထောင့်ထင်, အတိတ်အတှေ့အကွုံကိုသတိရစိုးရိမ်သောမိမိကိုယ်ကိုသက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြင်း simulation များအတွက်သက်ဆိုင်ရာ DMN ၏ subsystem သို့ပါဝင်ပတ်သက်။ ထို့အပြင် SN node များအတွက်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားမှုအကြား EDp အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်လိင်စိတ်နိုးထပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်လျော့နည်းသွားအသိအမှတ်ပြုမှုအကြံပြုသည်။
ကိုးကား: Cera N ကို, Di Pierro ED, Ferretti တစ်ဦးက, Tartaro တစ်ဦးက, Romani GL, et al ။ (2014) ဦးနှောက်ကွန်ယက် Complex ခေါ်ဆောင်သွား Movie, အခမဲ့ကြည့်ရှုစဉ်တွင်း: Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ်နယူး Insights ။ PLoS ONE9(8): e105336 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0105336
အယ်ဒီတာ: Qiyong Gong, စီချွမ်တက္ကသိုလ်, တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တရုတ်ဆေးရုံ
Received: မေလ 9, 2013; လက်ခံခဲ့သည်: ဇူလိုင်လ 23, 2014; Published: သြဂုတ်လ 15, 2014
မူပိုင်: © 2014 Cera et al ။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များမှီ, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြီးစီးသည်အထိလုံလောက်သော penile စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ် persistent သို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ် Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ် (ED) သတ်မှတ်ကြပါပြီ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လူ့အချက်များအားဖြင့်အများစုသို့မဟုတ်သီးသန့်စေသော , ။ အများအပြားကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ ED များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆက်စပ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, စိတ်ထိခိုက်အတိတ်အတွေ့အကြုံများ, လုံလောက်မှုမရှိလိင်ပညာရေးနှင့်တင်းကျပ်သောပြုစုပျိုးထောင်အချက်များ predisposing စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သက်တမ်းကာလအတွင်းကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများ, မိသားစုသို့မဟုတ်လူမှုရေးဖိအားနှင့်အဓိကဘဝဖြစ်ရပ်များ psychogenic ED များအတွက်အချက်များ precipitating ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါ ။ ထိုမှတပါး, Psychogenic ED သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်လူ့အခက်အခဲ (DSM-IV) ဖြစ်ပေါ်သည်။ နေ့စဉ်လက်တွေ့လက်တွေ့တွင် psychogenic ED လူနာစုံတွဲကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများ, လူ့အခက်အခဲနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်၏ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ချွေပြဿနာများအဖြစ်အရေးကြီးသောဘဝဖြစ်ရပ်များ, မှဆက်စပ်စိတ်ဖိစီးမှု၏စီးရီးသတင်းပို့ပါ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တွင်, အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသုံးပြီးကျန်းမာတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ကောက်ယူအများအပြား neuroimaging လေ့လာမှုများ, ထိုကဲ့သို့သော anterior နှင့်အလယျပိုငျး Cingulate Cortex (ACC; MCC) အဖြစ် cortical နှင့် subcortical ဦးနှောက်ဒေသများတစ်ရှုပ်ထွေးအစုံ, ဖော်ပြထားသည် Insula, အ Claustrum နှင့် အဆိုပါ Hypothalamus -။ ပြောင်းပြန်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (HC) ကိုနှိုင်းယှဉ် psychogenic ED (EDp) နဲ့လူနာဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး , ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှု HC မှနှိုင်းယှဉ် EDp အတွက် Ventral Striatum နှင့် Hypothalamus ၏စာပေးစာယူအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စတခုလျော့နည်းသွားအသံအတိုးအကျယ်ပြသ .
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များတွင် fMRI လေ့လာမှုများ Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏တင်ဆက်မှုနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ BOLD လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပြသ -။ ဤအပုံရိပ်လေ့လာမှုများ၏အခြေခံသည့်လိင်စိတ်နိုးထတဲ့အမှတ်အသားနှင့်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်းအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်သာမန်ဖြစ်ရပ်စဉ်းစား, penile စိုက်ထူ၏တစ်ပြိုင်တည်းအသံသွင်းဖြစ်တယ် , .
မကြာသေးမီကဂေဟဗေဒ-ခိုင်လုံသောလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကြီးထွားလာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ , -။ အဆိုပါ activation Paradigm အတွက်ဗဟိုပြဿနာအကြောင်းအရာနှင့်အချို့တိကျသောဦးနှောက် function ကိုမှပေးအပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားရိုးရှင်းတဲ့ဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအထွေထွေ Linear မော်ဒယ် (GLM) အဖြစ် hypothesis-based ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းလမ်းများ, ရှုပ်ထွေးသောရိုက်ကူးရေးဆွစဉ်အတွင်းစုဆောင်းဒေတာမှလျှောက်ထားမရနိုင် ။ အမှန်စင်စစ်ယခင်လေ့လာမှုများ, Dynamic Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းသုံးပြီးမဆို "ဟုဦး" အယူအဆမလိုအပ်ပါဘူးကြောင့် data ကိုမောင်းနှင်ချဉ်းကပ်လျှောက်ထားကြပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကတသမတ်တည်းရလဒ်များကိုဖေါ်ပြခြင်းရှုပ်ထွေးသော fMRI data တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောလွတ်လပ်သောစိတျအပိုငျးအားသုံးသပ်ခြင်းအားဖွငျ့ဆန်းစစ်နိုင် (ICA) သရုပ်ပြပါပြီ , ။ ထို့ကြောင့်နှင့် ICA ရိုက်ကူးရေးဆွစဉ်အတွင်းစုဆောင်း fMRI data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးဝင်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည် , ။ စုဆောင်းပြီးတာနဲ့နှင့် ICA ထို့အပြင်သို့ fMRI data တွေကိုခွဲခြားနှင့် Spatial လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှုဆို "ဟုဦး" ယူဆချက်မရှိပဲ, အချက်အလက်များ၏အခ်ါဖွဲ့စည်းပုံမှာအပေါ်အခြေခံသည်။ ရရှိလာတဲ့ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုလေ့တက်ကြွအပြုအမူတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း modulated ဖြစ်ကြောင်း somato-မော်တာ, အမြင်အာရုံ, အာရုံ, အာရုံစူးစိုက်မှု, ဘာသာစကား, မှတ်ဉာဏ်ကွန်ရက်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဗိသုကာအနှစ်ချုပ် , ။ ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းခြင်းပညာအများစုမှာပြည်နယ် fMRI (rsfMRI) လေ့လာမှုများအနားယူထံမှလာ၏။
အများဆုံးလေ့လာခဲ့ဦးနှောက်ကွန်ရက်များဖြစ်ကြသည်: အ Default Mode ကိုကွန်ယက် (DMN) အဆိုပါ Salience ကွန်ယက် (SN); အဆိုပါနံရံပစ်ကစားနည်း Parietal ထိန်းချုပ်ရေးကွန်ယက် (FPN), မူလတန်းအာရုံခံမော်တော်ကွန်ယက် (SMN), အ Visual ကွန်ယက် (VN), နှင့် Dorsal အာရုံစူးစိုက်မှုကွန်ရက် (ဒံ) -။ ထိုကွန်ယက်များအဓိက, အာရုံခံသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနဲ့ဆက်စပ်နေတာ -.
အဆိုပါအထီးလိင်စိတ်နိုးထအာရုံခံ, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, မှတ်ဉာဏ်နှင့် Emotion အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သော multidimensional အတှေ့အကွုံအဖြစ်ပဋိသန္ဓေယူနိုင်ပါသည် , ။ လုပ်ငန်းစဉ်များတစ်ဦးကအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး set ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအခြားတစ်ဖက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး, တွင်, Psychogenic ED ၏အရေးအပါဆုံး features တွေတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုကနေ , Psychogenic ED မြင့်အဆင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အလျှော့, အခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများထစ်အငေါ့အကဲဖြတ်, ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲများကို၏ Self-အသိအမြင်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံရသည်။ ဒီအထစ်အငေါ့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု medial Prefrontal Cortex (mPFC), အ Parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, အနောက်ကျနေခဲ့သည်ကို၎င်း, ACC / MCC ဟာ DMN များအတွက်အရေးပါ node များဖြစ်ကြောင်း, ထို FPN, နှင့် SN အဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီး -.
ပစ္စုပ္ပန် fMRI လေ့လာမှုမှာတော့ EDp နှင့် HC နှင့် ICA ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်ကွန်ရက်များအတွက် topological ကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်ရန်တစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားသောဗီဒီယိုကလစ်နှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ရွေးချယ်ထားခေါ်ဆောင်သွားကလစ်အခမဲ့ကြည့်ရှုပုံမှန်နှင့်ရောဂါဗေဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ကွန်ရက်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခွင့်ပြု, ကျန်းမာအမျိုးသားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထတတ်၏။
Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆယ့်ခြောက်လက်ျာဘက်လက်လိင်ကွဲပြင်ပလူနာ (EDp) နှင့်ကိုးကျန်းမာညာဘက်လက်သို့အပ်လိင်ကွဲယောက်ျား (ဆိုလိုအသက်အရွယ် = 33.4 ± 10.7 SD, အကွာအဝေး 19-63) (HC) (33.5 SD, အကွာအဝေး 11.4-21 ±အသက်အရွယ် 67 ဆိုလို) လေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
Psychogenic Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအောက်ပါစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့သည်: အရောင် Doppler Sonography နှင့်ပုံမှန် nocturnal စိုက်ထူအဆိုအရ Erectile အလုပ်မဖြစ်များအတွက်အော်ဂဲနစ် comorbidities သို့မဟုတ်သွေးကြောအန္တရာယ်အချက်များ၏မရှိခြင်း, သာမန်နံနက်စိုက်ထူပုံမှန် penile hemodynamics အဆိုပါRigiScan® device ကိုအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ် သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ညစဉ်ကာလအတွင်း။ ပုံမှန် nocturnal စိုက်ထူခြင်းနှင့် penile hemodynamic နှစ်ခုအုပ်စုများအတွက်အလားတူတန်ဖိုးများကိုထုတ်ဖော်, HC လည်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်ဖယ်ချန်စံခဲ့ကြသည်: (ဈ) အင်တာဗျူးအုပ်ချုပ်ခွင့် Mini ကို-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI) နဲ့အကဲဖြတ်မဆို 1 နှင့်2ဝင်ရိုးမမှန်များအတွက် DSM-IV စံတွေ့ဆုံ ; (ii) ဆို psychoactive ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေအံ့သောငှါကအခြားဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်း, (iii) ယခင် 30 ရက်ပေါင်းကာလအတွင်းအပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း, (ဃ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းဆေးဝါးအသုံးပြုမှု; နှင့် (v) အလက်တွေ့ anamnestic အင်တာဗျူးအားဖွငျ့အကဲဖြတ်မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်၏သမိုင်း။
HC များအတွက်အပိုဆောင်းဖယ်စံနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ခဲ့ကြသည်: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ (ဈ) သမိုင်း; (ii) လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ချို့တဲ့အတွေ့အကြုံကို။
EDp နှင့် HC (စားပွဲတင် 1) လူမျိုးရေး, အသက်, ပညာရေး, အိမ်ထောင်ရေးနှင့်လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းအတွက်ကွာခြားနှင့်နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမပြုခဲ့ .
စားပွဲတင် 1 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ရလဒ်များကို။
အားလုံးအလားအလာဘာသာရပ်များတစ်စိတ်ရောဂါနဲ့ 1-ဇအင်တာဗျူးခံယူခြင်းနှင့် Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF) အပါအဝင်မေးခွန်းများစွာထုတ်ဖြည့် Expanded, လိင်စိတ်နိုးထ Inventory (SAI-E) ,  နှင့် SCL-90-R ကို , ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory (Stay) , bis / BAS စကေး ။ အဆိုပါလေ့လာမှုဒီဇိုင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်ဘာသာရပ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကြိုတင်အင်တာဗျူးနှင့်မေးခွန်းထုတ်ဖြည့်ခံရဖို့အသိပေးသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ '' ခွင့်ပြုချက်သည့်ဟယ်လ်စင်ကီကြေညာစာတမ်းအရသိရသည်ရယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုတက္ကသိုလ် Chieti ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဗီဒီယိုအားလှုံ့ဆော်မှု၏ရွေးချယ်ရေးအဘို့, 30 ခေါ်ဆောင်သွားကလစ်များစီးပွားဖြစ်ရုပ်ရှင်ထဲကနေရှေးခယျြခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကြည့်ရှု၏အနိမ့်ဆုံးနှင့်အတူတစ် rating စကေးအတိုင်း, ကောက်နှုတ်ချက် rated ကြောင်းကျန်းမာဘာသာရပ်များ 20 တစ်ဦးကိုကျပန်းအမိန့် (အသက် 20-61 နှစ်) အတွက်တင်ပြ ကလစ်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ရိပ်မိ arousal အောက်ပါအတိုင်းအတာစဉ်းစား 1 နှင့်7ဦးရေအများဆုံး။ သို့သော်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်စုဆောင်းအဆိုပါဘာသာရပ်များအတွက် fMRI စမ်းသပ်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါဘူး။
တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးချယ်ထားသည့်ဗီဒီယို Koukounas နှင့်ကျော်၏လမ်းညွှန်ချက်များသည်အောက်ပါတယောက်သောသူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး (petting, အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်ပါးစပ်လိင်) တို့အကြားကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကပြသ  နှင့်7မိနစ်တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူမှတင်ပြခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များသည်သူ၏ရိပ်မိလိင်စိတ်နိုးထ၏အစအဦးမှာ MRI သဟဇာတ button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့ခံစားချက်သတင်းပို့ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုကလစ်တင်ဆက်မှုနှင့်ခလုတ်ကိုစာနယ်ဇင်းမှတ်တမ်းတင်သည့်ကင်နာ console ကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်နေရာတစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ run နေတဲ့ MATLAB ကိုအိမ်မှာလုပ် program ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်တစ်ခု LCD ကိုပရိုဂျက်တာအားဖွငျ့စကင်နာထွင်းဖေါက်၏နောက်ကျောအပေါ်ထားရှိတစ်စဖန်ခွက်ပေါ် projected ခဲ့သည်။ ယင်းသံလိုက်အထဲမှာဦးခေါင်းကွိုင်မှ fixed တစ်ဦးကမှန်သည့်ဘာသာရပ်များဗီဒီယိုကလစ်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
fMRI session ရဲ့အဆုံးမှာတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ် (အလွန်မြင့်မားသော7ဖို့အလွန်အမင်းနိမ့် 1) တစ်ဦး 7-ရမှတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးအညီကလစ်၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထသူ၏ခံစားချက်နှင့် ပတ်သက်. ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
penile tumescence စဉ်ဆက်မပြတ်ရုပ်ရှင်တင်ဆက်မှုနှင့်မွေးကင်းစအရွယ်သွေးဖိအား cuff အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးထုံးစံ-built MRI-သဟဇာတ pneumatic device ကိုအားဖွငျ့ fMRI data တွေကိုရှာမှီးနေစဉ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မတိုင်မီ fMRI ဝယ်ယူရဲ့ start ရန်, ဖိအား cuff ကွန်ဒုံးသုံးပြီးလိင်တံပေါ်မှာနေရာချစကာနှင့် 80 မီလီမီတာ Hg ၏ကနဦးဖိအားဖောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ cuff console ကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်နေရာတစ်ဖိအား transducer တစ်ပါးလွှာပြွန်ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖိအား transducer တစ်ဦးအသံချဲ့စက်မှချိတ်ဆက်ခဲ့သည်နှင့်ဒီကိရိယာကနေ Analog စ signal ကို Off-line ကိုဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကို PC ပေါ်မှာ 100 Hz တစ်နမူနာမှုနှုန်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ခဲ့သည်။
တစ်ဦး pneumatic အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခါးပတ်ဘာသာရပ်ရဲ့အသက်ရှူများ၏တိုးချဲ့တိုင်းတာရန်အထက်ဝမ်းဗိုက်ပတ်လည်မှာခါးနေစဉ်လက်ဝဲလက်ညှိုးအပေါ်ထားရှိ photoplethysmograph built-in တစ်ခုကင်နာရဲ့, နှလုံးအချက်ပြမှုများကိုစောင့်ကြည့်။ နှစ်ဦးစလုံး cardio နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ (CR) အချက်ပြမှုများ 100 Hz မှာစကင်နာများကနမူနာများနှင့် txt format နဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတပါးနှလုံး signal ကိုတစ် R-အထွတ်အထိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်မှတ်သားခဲ့သည်ရိုက်တယ်။
fMRI data တွေကိုရှာမှီး
functional နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ် signal ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့် signal ကိုဧည့်ခံဘို့အကာရှစ်ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်တစ်ခုလုံးကိုယျခန်ဓာ radiofrequency ကွိုင်သုံးပြီး 3T Philips က Achieva MRI စကင်နာ (Philips ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ, အကောင်းဆုံး, အဆိုပါနယ်သာလန်) နဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ မှီခိုသောအသွေးကိုအောက်ဆီဂျင်အဆင့် (BOLD) fMRI ဒေတာ T2 * အားဖွငျ့ဝယ်ယူခဲ့သည်ကိုအောက်ပါ parameters တွေကိုနှင့်အတူ echo-ပြို (EPI) ပာ -weighted: In-လေယာဉ်, TE = 35 ms, matrix ကိုအရွယ်အစား = 80 × 80, FOV = 230 မီလီမီတာ voxel အရွယ်အစား = 2.875 × 2.875 မီလီမီတာ, သဘောဖွငျ့အချက် 1.8 anterior-posterior, လှန်ထောင့် = 80 °မရှိကွာဟမှုတွေနဲ့အချပ်အထူ =3မီလီမီတာ။ အဲဒီ session စဉ်အတွင်း 210 transaxial ချပ်ပါဝင်သည်ဟု 31 အလုပ်လုပ်တဲ့ volumes ကို2s ကိုတစ်ဦး TR နှင့်အတူဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံး resolution ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်တစ် 3D အစာရှောင်ခြင်းအကွက်တွင်ပဲ့တင်သံ T1 မာန်တင်း sequence ကို (; လှန်ထောင့် 1 °, သဘောဖွငျ့အချက် 8.1 voxel အရွယ်အစား 3.7 မီလီမီတာ isotropic, TR / TE = 8 /2ms) ကနေတဆင့်အဲဒီ session ရဲ့အဆုံးမှာဝယ်ယူခဲ့သည်။
penile tumescence အချိန်စီးရီးအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI volumes ကို (TR = 100 ့) ၏နမူနာနှုန်း2Hz မှဆင်း-နမူနာခဲ့ကြသည်, linear detrended နှင့်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲတန်ဖိုးများအတွက်အသွင်ပြောင်း။ ပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲပုံမှန် penile tumescence (PT) တန်ဖိုးကိုတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်အမြင်ဆွ၏တပြင်လုံးကိုကာလအဘို့တွက်ချက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးနှစ်ဦးအမြီး t-စမ်းသပ်မှုအားဖွငျ့အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
နှလုံးနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်းကိုအချိန်စီးရီး MATLAB ကို (The MathWorks Inc ကို, Natick MA, ယူအက်စ်အေ) တွင်အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့အိမ်မှာလုပ် program ကို အသုံးပြု. တွက်ချက်နှင့် TR တန်ဖိုး resampled ခဲ့ကြသည်။ ပျမ်းမျှနှလုံးနှုန်း (HR) နှင့်အမြင်အာရုံဆွဘို့အအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်း (RR) တန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ HR နဲ့ RR အတွက်အုပ်စုများကွဲပြားမှုများအကြားစာရင်းအင်းများသိသိသာသာတစ်ဦးနှစ်ဦး-tailed t-စမ်းသပ်မှု (EDp, HC Group မှ) ၏နည်းလမ်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
BOLD fMRI အချက်အလက်များကိုဦးနှောက် Voyager QX software ကို (ဦးနှောက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အဆိုပါနယ်သာလန်) ၏နည်းလမ်းဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
ကြောင့် T1 ရွှဲသက်ရောက်မှုမှတစ်ခုချင်းစီပြေး၏ပထမဦးဆုံး2Scan ဖတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကနေစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ Scan ဖတ်၏ Preprocessing ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်း, voxel အချိန်စီးရီးများနှင့်အချပ်စကင်ကိုအချိန်ဆုံးမခြင်းကနေ linear ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ဖယ်ရှားရေးပါဝင်သည်။ ရည်ညွှန်းအသံအတိုးအကျယ်မှတစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုက်ညီစေရန်, အဆိုကိုဆုံးမခြင်းသုံးရှုထောင်တင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အချိန်ကိုသင်တန်းတစ်ခုချင်းစီကိုအသံအတိုးအကျယ်များအတွက်ခန့်မှန်းဘာသာပြန်ချက်နှင့်လည်ပတ် parameters တွေကိုလှုပ်ရှားမှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဝက် voxel ထက်ပိုကြီးတဲ့မဟုတျကွောငျးစစျဆေးဖို့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခဲ့ကြသည် , ။ ထို့နောက်သူတို့ Spatial တစ်ခု isotropic Gaussian kernel ကို (FWHM =6မီလီမီတာ) နဲ့ convolution အားဖြင့်ပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်။
အကြောင်းအရာ၏ Preprocessed အလုပ်လုပ်တဲ့ volumes ကိုသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒေတာအစုနှင့်အတူ coregistered ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ 2D အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် 3D ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတိုင်းတာအတူတူ session တစ်ခုအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ကြကတည်းက coregistration အသွင်ပြောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ volume ၏အနေအထားကို parameters တွေကိုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒ Scan ဖတ်အကြား alignment ကိုနောက်ဆုံးတော့တစ်ခုတိကျအမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအားဖွငျ့ check လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ် volumes ကို Talairach အာကာသသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်  တစ်ဦး piecewise ဆှဖှေဲ့နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အသွင်ပြောင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ functional volumes ကို3×3×3မီလီမီတာတစ် voxel အရွယ်အစားမှာ resampled ခဲ့ကြသည်3.
ကျနော်တို့ White ကအရေးပါ (WM) နှင့် Cerebro-ကျောရိုးအရည် (CSF) မှနမူနာအချက်ပြမှုများကိုလုပ်ပါတယ်ကြောင်း2covariates ပါဝင်သည် ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ရဲ့ WM မျက်နှာဖုံးများနှင့် CSF အတွက် voxels ၏အချိန်သင်တန်းများပျမ်းမျှအဆိုပါ WM နှင့် CSF အချက်ပြမှုများဆင်းသက်လာ။ CSF အချက်ပြမှုများကိုတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ် '' ဦးနှောက်၏တတိယ ventricle ကနေနမူနာစဉ်တွင်အဆိုပါ WM မျက်နှာဖုံးများ, တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ရဲ့ဦးနှောက်၏ segment ဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။
Spatial နှင့် ICA လွတ်လပ်သော spatiotemporal ပုံစံများ (ICS) အစုတခုထဲသို့ voxel အချိန်စီးရီး၏ပြိုကွဲများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ MR ပုံရိပ်ဒေတာအစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ FastICA algorithm ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက် 30 ICS ခန့်မှန်း တစ်ငွေကြေးကျုံ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့် tanh nonlinearity နှင့်အတူ , , တသမတ်တည်းလည်း Pamilo နေဖြင့်အဆိုပြုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူ ။ အကျိုးစီးပွား ICS ကိုရွေးဖို့ကျနော်တို့ယခင်ထုတ်ဝေစာတမ်းများကနေဦးနှောက်အတွင်းအခ်ါဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များ (ICNs) ၏တင်းပလိတ်များအသုံးပြုခဲ့သည်။ Spatial လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆက်စပ်မှုချင်းစီ template ကိုများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုတင်းပလိတ်များ ,  လက်ရှိအလုပ်ရှိကြ၏ဟုယူဆ: နံရံပစ်ကစားနည်း Parietal ကွန်ယက် (FPN), ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကွန်ယက် (CEN), ပုံမှန် Mode ကိုကွန်ယက် (DMN), Somato-မော်တော်ကွန်ယက် (SMN), Visual ကွန်ယက် (VN), အာရုံကွန်ယက် (AN), နှင့် Salience ကွန်ယက် (SN) ။
လေ့လာမှုများ multisubject မှ Single-ဘာသာရပ်ကနေနှင့် ICA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုးချဲ့ဖို့, တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်အနေဖြင့်ခန့်မှန်းသည့် ICS သူတို့ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တူညီသည်နှင့်အညီ, Self-စည်းရုံးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် ICA (sogICA) method ကိုအတူပြွတ်ခဲ့ကြသည် ။ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအတက်အကျ၏ spatio-ယာယီကွဲပြားပုံစံများထုတ်ယူခဲ့ကြ၏တစ်ဦးကလျှော့ချအရေအတွက်ကို , .
fMRI အချက်အလက်ပေါ်နှင့် ICA ပင်ကိုစရိုက်ကဆိုနိုင်ပါတယ်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု (ဆိုလိုသည်မှာကွန်ရက်များ) ၏ပုံစံများ extracts အမျှတစ်ဦးချင်းစီပြမြေပုံများမှရရှိသော Z တန်ဖိုးများ, သွယ်ဝိုက်ကွန်ယက်အတွင်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာပေးနိုငျ .
အကျိုးစီးပွားပြွတ်တစ်ဦးချင်းစီ ICNs ၏ node များတွင်ထည့်သွင်းသူတို့သာစဉ်းစားခဲ့ကြသည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကွန်ယက်အတွက်အကြား-အုပ်စုများကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ICA အုပ်စုတစ်စုမြေပုံများအားဖြင့်ရရှိသော Z တန်ဖိုးများပေါ်တွင်တစ်ဦး voxel ပညာရှိတလမ်းတည်းဖြင့် ANOVA အားဖွငျ့အကဲဖြတ်နှင့်ခံခဲ့ရသည်။
အုပ်စုကွဲပြားမှုမြေပုံအကြားα <0.05, တစ် ဦး အရေးပါမှုအဆင့် (တစ်ခုလုံးကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်များအတွက်မှားယွင်းသောထောက်လှမ်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ) မှာတံခါးခုံခဲ့ကြသည်မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်တညျ့။ မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်ပြင်ဆင်ချက်စပျစ်သီးပြွတ် - အရွယ်အစားတံခါးခ algorithm ကိုအသုံးပြု။ ဖျော်ဖြေခဲ့သည်  BrainVoyager QX software တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော Monte Carlo Simulator များအပေါ်အခြေခံသည်။ voxel အဆင့်တွင် p <0.005 ၏သတ်မှတ်ထားသောနိမ့်ကျမှုတစ်ခု၊ voxels နှင့် Spatial ဆက်စပ်မှု၏ Gaussian kernel အနေဖြင့် FWHM = ၁.၈၄၂ voxel နှင့် voxel အကြား 1.842 ကြား၌အနိမ့်ဆုံးစပျစ်သီးပြွတ် ၂၂ voxels ကိုအသုံးပြုသည်။
voxel ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်, Z ကိုတန်ဖိုးများကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အကြားခြားနားချက်ဖေါ်ပြခြင်း, မြေပုံ၏ပြွတ်ထံမှ extrapolated နေကြပြီး, တစ်ဦးနှစ်ဦးအမြီး t ကိုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်တစ်ဦး Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Sai-E နှင့် IIEF ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Z ကိုကွန်ယက်မြေပုံကနေတန်ဖိုးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီရွယ်၏ Z တန်ဖိုးများ (စုစုပေါင်းရမှတ်, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တော့ပူပန် subscale ရမှတ်များအပါအဝင်) IIEF နှင့် Sai-E ကိုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်ဆိုလို။
Sociodemographic, EDp နှင့် HC ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဒေတာ Table1 အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။
အကြား-အုပ်စုသည်ပညာရေးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားမှု (နှစ်) နှင့်အသက်အရွယ်သိသာဘူး။ EDp များတွင်လိင်စိတ်နိုးထ Inventory နှင့် IIEF အပေါ်ရမှတ် (ကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများထက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြစားပွဲတင် 1).
penile tumescence သာ HC အုပ်စုတွင်သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအကြား-အုပ်စုများကွဲပြားခြားနားမှု (နှလုံးနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှုနှုန်းအဘို့ရှုလေ့လာခဲ့ကြသဖန်းသီး။ 1 နှင့် စားပွဲတင် 1).
ပုံ 1 ။ ဇီဝကမ္မရလဒ်များကို။
လက်ဝဲဘက် - HC နံပါတ် ၅ နှင့် EDp နံပါတ် ၁၁ အတွက် Penile tumescence တိုင်းတာရေးကိရိယာ၊ နှလုံးနှင့်အသက်ရှူနှုန်းနှုန်းတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ penile တုံ့ပြန်မှုကိုအချိန်နည်းနည်းလေ့လာခြင်းဥပမာ။ ညာဘက် - histogram တွေကအုပ်စုခွဲခြားမှု၊ နှလုံးနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများအကြားပျမ်းမျှအားပြသထားတယ်။ အသီးသီးနှုန်း။ p <5 နှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသထားသော penile tumccence ဒေါင်လိုက်ဘားများသည်ယုတ်၏စံမှားယွင်းမှုများကိုဆိုလိုသည်။
ကွန်ရက် Spatial ပုံစံ
နှင့် ICA အုပ်စုတစ်စုခွဲခြား EDp နှင့် HC အုပ်စုတစ်စုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွန်ယက်တွင်ပုံမှန် Spatial ပုံစံဖော်ပြခဲ့တယ်။ IC ခွဲခြားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတသမတ်တည်းကွန်ရက်များထုတ်လုပ် , , -အတွက်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ သဖန်းသီး။ 2.
ပုံ2။ ICNs နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ pooling လေ့လာသည်။
ခေါ်ဆောင်သွားသောဗီဒီယိုကလစ်တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိ Spatial ပုံစံများ။ နံရံပစ်ကစားနည်း-Parietal ကွန်ယက် (FPN), ပုံမှန်-Mode ကိုကွန်ယက် (DMN), Salience ကွန်ယက် (SN) နှင့် Visual ကွန်ယက် (VN) ။ Maps ကိုတစ်ဦး Talairach Atlas အပေါ် overimposed နှင့် Z =2တစ်ခုံနှင့်အတူ radiological စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုအတွက်ဖြစ်ကြ၏။
အုပ်စုတစ်စု-Level မှာဖော်ထုတ်ဦးနှောက်ကွန်ရက်များဖြစ်ကြသည်: ဈ) DMN, ii) FPN ညာဘက်အကြာတွင် iii) SN နှင့်ဃ) VN ။ ကျနော်တို့ကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး: ဈ) AN, ii) CEN နှင့် iii) SMN ။
စားပွဲတင်2ယုတ်ထိပ် foci ၏ Talairach သြဒီနိတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသော Brodmann ဒေသများ (BA) နှင့်အတူအသီးအသီးကွန်ယက်တွင်ဦးနှောက်ဒေသများများ၏စာရင်းကိုပေးသည်။
စားပွဲတင်2။ ယင်းအုပ်စုနှစ်စုများအတွက်ငါးကွန်ရက်ကဦးနှောက်ဧရိယာများ။
ရလဒ်ကွန်ရက်များအကြား, အ DMN နှင့် SN အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု (အကြားပြသသဖန်းသီး။ 3).
ပုံ3။ ယင်းအုပ်စုနှစ်စုအတွင်းအုပ်စုတစ်စု-Level ကွန်ရက် DMN, SN, FPN နှင့် VN cortical ကိုယ်စားပြုမှု။
ထိပ်တန်း: ED လူနာ; နှိမ့်ချ: ကျန်းမာရေးကိုထိန်းချုပ်သည်။
အဆိုပါ DMN ,  အဆိုပါ Posterior Cingulate Cortex (ကျုံ့သွားစေပါတယ်), အ Precuneus (PCUN), အ medial prefrontal cortex (mPFC) နှင့်ယုတ်ညံ့ Parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏အဆင့်မှာလေ့လာတွေ့ရှိနှစ်ခုနှစ်နိုင်ငံ node များ (IPL): အောက်ပါ node များသဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဆိုပါ SN  နှစ်နိုင်ငံ Insulae နှင့် ACC ၏စာပေးစာယူအတွက်အဓိက node သုံးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Two-tailed t-test သည် DMN နှင့်အုပ်စုနှစ်ခုအကြား SN အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုတွင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်ကိုဖော်ပြသည်။ EDp အုပ်စုသည်သိသာစွာလျော့နည်းသွားသော Z တန်ဖိုးများကိုပြသခြင်း၊ ပင်ကိုဆက်သွယ်မှုအဆင့်ကိုညွှန်ပြခြင်း၊ DMN အတွက် t (33) = -4.04 နှင့် p <0.01 သည်နှိုင်းယှဉ်မှုများစွာအတွက်တည့်မတ်ပေးခဲ့ပြီး SN အတွက်မူ t နှင့် (33) = -4.73 နှင့်အတူ Z တန်ဖိုးများလျော့နည်းသွားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှင့် p <0.01 မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်တညျ့။
ထို့အပြင် EDV> HC နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ANOVA သည် DMN မြေပုံတွင်တစ်လမ်းသွားလုပ်ဆောင်သော voxel ပညာသည် mPFC၊ PCC / PCUN နှင့်ဘယ်ဘက် IPL တို့၏စာပေးစာယူတွင်ဆက်သွယ်မှုတန်ဖိုးသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ SN အဘို့, voxel ပညာရှိ ANOVA သိသိသာသာလျော့နည်းညာဘက်အလယ် Insular cortex / Claustrum ၏စာပေးစာယူအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနေစဉ် dorsal ACC ၏စာပေးစာယူအတွက်အခ်ါဆက်သွယ်မှု၏သိသိသာသာတိုးမြှင့်ပြသခဲ့သည် (သဖန်းသီး။4နှင့် စားပွဲပေါ်မှာ 3).
ပုံ4။ DMN နှင့် SN: အုပျစုကွဲပြားမှုများအကြား။
အပေါ် - DMN; Down: SN ။ မြေပုံများသည် Talairach Atlas တွင် overimpimped နှင့် radiological Convention (p <0.05) တွင်ရှိသည်။ အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကို VOVEL ပညာဖြင့် ANOVA နည်းလမ်းဖြင့်အကဲဖြတ်သည်။
စားပွဲတင်3။ အုပ်စုတစ်စုရလဒ်များကိုအကြား။
Sai-E နှင့်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားမှုများအကြားပြသသော node များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် Z တန်ဖိုးများဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏အမူအကျင့်အစီအမံများအကြားဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတစ်ခုချင်းစီကို node တစ်ခု၏တိကျသော linear စပ်လျဉ်းစောငျ့ရှောကျဖို့အလို့ငှာထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ EDp အုပ်စုအဘို့, SAI -E (စိတ်လှုပ်ရှား subscale) နှင့်လက်ဝဲ IPL Z ကိုတန်ဖိုးများအကြားတစ် ဦး အပြုသဘော linear ဆက်စပ်မှု (r = 0.60, p <0.05 မမှန်ကန်သော) လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင် fMRI လေ့လာမှုများလူ့လိင်စိတ်နိုးထ, အာရုံခံသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များတစ်ရှုပ်ထွေးထားကြောင်းပြသကြ -။ ဤသည်ရှုပ်ထွေးခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းများ၏ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းလိင်စိတ်နိုးထ, အခြေခံဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထင်ဟပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားသောဗီဒီယိုကလစ်အခမဲ့ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း Psychogenic ED နှင့်အတူလူနာအတွက်ဦးနှောက်ကွန်ရက်များပြုပြင်မွမ်းမံစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အဆိုပါနှင့် ICA Spatial လွတ်လပ်သောဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုအစုတခုထဲမှာရှုပ်ထွေးပြီးပြောင်းလဲနေသောရိုက်ကူးရေးပစ္စည်း၏ရူပါရုံကိုမှတစ်ပြိုင်တည်းပါကဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှု, disentangling ၏အားသာချက်တွေ့ရမယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျွန်တော့်အစားရိုးရှင်းတဲ့အုပ်စုတစ်စုနှင့် ICA နည်းလမ်းများ၏အုပ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် SogICA algorithm ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Esposito et al ဖွငျ့ဖျောပွထားသညျ။ ယင်းအဆိုပြု SogICA ချဉ်းကပ်ဘာသာရပ်များဖြတ်ပြီးလွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုမြေပုံများအားဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာခြားနားချက်များတသားတည်းမဟုတ်သတင်းရင်းမြစ်၏ရှေ့မှောက်တွင်မှလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားကြိုတင်ခန့်မှန်း (ဥပမာ, လိင်, အသက်အရွယ်, etc) အဖြစ်မဟုတ်နှစ်မျိုးလုံးကိုအလွယ်တကူခန့်မှန်းအချက်များဘက်လိုက်မှုမှအုပ်စုနှင့် ICA မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် SogICA ကဲ့သို့ကြံ့ခိုင်နည်းလမ်းများ၏ရွေးချယ်မှုလှုံ့ဆျောမှုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ (လူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ) ပါဝင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအတွက်အမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရွေးချယ်ရေးကျန်းမာယောက်ျား၏အုပ်စုတစုအားဖြင့်မတိုင်မီ fMRI စမ်းသပ်မှုစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းသင်တန်းသားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Pamilo နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ဦးတည်းသာနှိုးဆွ, မရွေးနှင့်သင်တန်းသားများကိုတင်ပြ ။ ထို့အပြင်အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိင်စိတ်နိုးထစုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းယခင်ကထုတ်ဝေ activation လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် -.
စမ်းသပ် session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့ကျနော်တို့ (အသီးသီးနှလုံးနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်းထားများမကွဲပြားမှုနှင့်အတူ penile erectile တုံ့ပြန်မှုအတွက်အုပ်စုတစ်စုကွာခြားချက်အကြားသိသာထင်ရှားသောရှုလေ့လာသဖန်းသီး။ 1) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏ .
အဆိုပါဖျော်ဖြေနှင့် ICA (ထို DMN, အ FPN, အ VN, နှင့် SN ED လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကိုဖြတ်ပြီး Spatial တသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းပြသသဖန်းသီး။ 2) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုယခင် rsfMRI လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ , ,  ဦးနှောက်ကွန်ရက်နှင့်သဘာရူပါရုံကိုလေ့လာမှုများ .
လေးပါးလေ့လာဦးနှောက်ကွန်ရက်များအကြား, functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပု EDp အုပ်စုတွင်တစ်ဦးလျော့နည်းသွား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြခြင်း, DMN အတွက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နေစဉ် HC မှနှိုင်းယှဉ် EDp အတွက် SN, လက်ျာ Insula အတွက်လျော့နည်းသွား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်နှင့် ACC အတွက်ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
HC မှနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို EDp အတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသ activation အပေါ်ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်, activation လေ့လာမှုများလိင်စိတ်နိုးထ၏သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများတွင်တိကျတဲ့ပွောငျးလဲဘို့အထောက်အထားများပေးအပ် , ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို EDp အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှု, တိကျတဲ့ကွန်ယက်ကိုကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါရရှိသော DMN ၏ Spatial ပုံစံသည်ယခင်တာဝန်နှင့် rsfMRI လေ့လာမှုများအတွက်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်သူတို့နှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏ , , ။ အဆိုပါ DMN တစ်ဦးချင်းစီပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မရကြသောအခါများသောအားဖြင့်မြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့ခန္ဓာဗေဒသတ်မှတ်ဦးနှောက်စနစ် , ။ အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိ DMN ကျုံ့သွားစေပါတယ် / pCUN, အ mPFC, နှင့် IPL ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါ ပုံ3EDp အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့လျော့ချ DMN functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုသရုပ်ဖော်သည်။ အထူးသဖြင့်, ဒီအုပ်စုက mPFC, ကျုံ့သွားစေပါတယ် / PCUN နှင့်ဘယ်ဘက် IPL အတွက်အခ်ါဆက်သွယ်မှု၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ပြသခဲ့သည်။ Buckner အဆိုအရ  အဆိုပါ DMN နှစ်ခု subsystem ၌ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ ပထမ Hippocampus နှင့် Parahippocampus ဒေသများအားဖြင့်ရေးစပ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုအားထင်ရှားနေသည်။ ဒုတိယ subsystem သို့ကျုံ့သွားစေပါတယ်, အ IPLs, နှင့် ventral mPFC ပါဝင်ပတ်သက်။ ဤသည် subsystem သို့မိမိကိုယ်မိမိသက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြင်း simulation ၏တာဝန်များကိုကာလအတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမြင်အရ, DMN နားလည်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနဲ့စာနာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်သက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြင်း simulation အတွက်မယ့်အခြားအစိတ်ပိုင်း status ကိုပြန်ဆို , ။ အမှန်စင်စစ်ကျန်းမာဘာသာရပ်များ EDp ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏ပုံရိပ်စစ်အတွက်စေ့စပ်နှင့်ကျုံ့သွားစေပါတယ် / PCUN, အ mPFC နှင့်ဘယ်ဘက် IPL (၏စာပေးစာယူအတွက်ချိတ်ဆက်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ပြသမည်အကြောင်း,သဖန်းသီး။ 4) ။ ကျုံ့သွားစေပါတယ် / PCUN အဆိုပါ DMN အချက်အချာဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့် autobiographical နှင့်စိတ်ခံစားမှုအမှတ်တရများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် -။ အဆိုပါ mPFC ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှု၏စည်းမျဉ်းများအတွက်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီး .
လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစား Self-သက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြင်း simulation ၏ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းအမှတ်တရများ၏ပုံစံအတွက်အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထင်သော mPFC အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြားနားချက်များတွင်ထင်ဟပ်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်, ထို mPFC စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များများ၏စောင့်ကြည့်မှုများနှင့်အခြားသူများရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ ပတ်သက်. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့, လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ mPFC ၏ Deactivate အပျက်သဘောအမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် erectile တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ related ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် ။ ထို့အပြင် mPFC အတွက် activation ယေဘုယျ arousal ရန်, အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏မိမိကိုယ်ကို-related ငှါ၎င်း, erectile တုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေယန္တရားများအတွက် related ခဲ့သည် , , ။ ထိုသို့သောအားဖြင့်လူနာအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွကနေဆင်းသက်လာ hedonic အတွေ့အကြုံ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူယေဘုယျ arousal ပြည်နယ်များတစ်လျော့နည်းသွားစောင့်ကြည့်ရေးပြခဲ့တယ်။
အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုများအကြားမှာလည်းလက်ဝဲ IPL မှစာပေးစာယူမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ပုံရသည်။ Mouras အဆိုအရ , အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းဤဒေသ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ်မှတ်တစ်ခုတိုးလာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နိုးထအပြောင်းအလဲနဲ့၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းကပိုင်ဆိုင်သည်။ ထို့ပြင်လက်ဝဲ IPL အလောင်းတွေ၏ visuospatial ကိုယ်စားပြုမှု်ပတ်သက်နေတဲ့စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် ။ ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်ကျန်ရှိသော, လက်ျာ IPL မိမိကိုယ်ကို / အခြားအဂုဏ်ထူး၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးကြီးကြောင်းညွှန်ပြအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် , ။ သို့သော် Decety အညီ  အဆိုပါ IPL မော်တာပုံရိပ်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အလားတူပင်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်း IPL အတွက် activation ဗီဒီယိုကလစ်ပ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်သူတို့အားအလားတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူလုပ်ဆောင်ပေးရန်အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီး .
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ရလဒ်ကတော့ SN အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အကြားအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံ2နှင့် စားပွဲပေါ်မှာ2နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိ SN ၏တသမတ်တည်းပုံစံပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာ SN ၏ပုံစံသည်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်းအတွက် ACC နှင့်နှစ်နိုင်ငံနောက်ကျနေခဲ့သည် cortical ပါဝင်ပတ်သက်။ အဆိုပါ SN ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်အလွန်အမင်း-လုပ်ငန်းများ၌အာရုံခံအဆိုပါ visceral နှင့်အတူဒေတာ, အကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, နှင့်သက်ရှိခွင့်ပြုသည့် hedonic အမှတ်အသားများ၏ပေါင်းစည်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အုပ်စုနှစ်စုများအတွက် SN ၏ကျောင်းအုပ်ကြီး node များတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလေ့လာသည်။ အထူးသဖြင့်, ED လူနာညာဘက်အလယ် Insula ၏စာပေးစာယူအတွက်အခ်ါဆက်သွယ်မှုတစ်ခုလျော့နည်းသွားအဆင့်ကိုပြသသည်။ ဤဒေသတွင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ကွဲပြားခြားနားသော features တွေပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ Arnow နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ  Ferretti et al နေစဉ်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ၏လှုပ်ရှားမှု, စိုက်ထူ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးလေ့လာသည်။  ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဖို့စဉ်ဆက်မပြတ် penile တုံ့ပြန်မှုတာဝန်ရှိသည်ယန္တရားများအတွက် Insula များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေးဆ။ ထို့ပြင်ညာဘက်အလယ် Insula စတင်ခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စိုက်ထူနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ယန္တယားအဘို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည် .
ပြောင်းပြန် ED လူနာ HC ထက် ACC အတွက်ချိတ်ဆက်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ပြသသည်။ ACC အဆိုပါ bioregulation တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Dorsal သည်အသက်ရှူ  နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ arousal ပြည်နယ်များ ။ ထို့အပြင် ACC အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ epileptic သိမ်းယူမှု, လိင်အင်္ဂါအလိုအလြောကျဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည် ။ Abler နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2011) ၏အဆိုအရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု BA ဘွဲ့ 24 / 32 အတွက် activation လျော့နည်းသွားနှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီး .
အကျဉ်းချုပ်၌အကြှနျုပျတို့၏ရလဒ်များကိုအခမဲ့ခေါ်ဆောင်သွားကလစ်၏မြင်ကွင်းနှင့် ICA ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခြေခံဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ပြိုကွဲခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယခင် activation လေ့လာမှုများစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဦးနှောက်ဒေသများတွင်အစုတခုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို Psychogenic ED လူနာကွန်ယက်ကိုအဆင့်မှာပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤရလဒ်သည် Psychogenic ED ထိုကဲ့သို့သော DMN နှင့် SN အဖြစ်အဆင့်မြင့်ကွန်ယက်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု aberrant နှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရပုံကိုပြသသည်။ အထူးသဖြင့်, Psychogenic ED မိမိကိုယ်ကိုသက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြင်း simulation ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံရသည်, နှင့်အထွေထွေနိမ့်မယ့်အခြားအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်စာနာမှုအဖြစ် DMN node များအတွက်ချိတ်ဆက်မှုများလျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့်ပေးသောစိတ်ခံစားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်။ ထို Insula အတွက်လျော့နည်းသွားဆက်သွယ်မှုနှင့် ACC အတွက်တိုးမြှင့်ဆက်သွယ်မှုများကအကြံပြုအဖြစ်ဆန့်ကျင်တွင် SN အဘို့, လူနာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ arousal ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်လျော့နည်းသွားအသိအမှတ်ပြုမှုပြသခဲ့သည်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: NC EDDP AF ။ NC ကို AT EDDP: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: NC MGP ။ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား GLR: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1 ။ Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ် Wespes အီး, Amar အီး, Hatzichristou: D, Hatzimouratidis K ကို Montorsi က F (2005) လမ်းညွှန်ချက်များ။ Urology ၏ဥရောပအသင်းမှ။ ရရှိနိုင်ပါ: http://www.uroweb.org/guidelines/online-​guidelines/။ 2014 ဇူလိုင် 26 ဝင်ရောက်။
2 ။ ရို RC (2001) Psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ခွဲခြားခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ မြောက်အမေရိက 28 (2) ၏ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆေးခန်း: 269-278 ။ Doi: 10.1016 / s0094-0143 (05) 70137-3
3 ။ Shamloul R ကို, Ghanem H ကို (2013) Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ The Lancet 381 (9861): 153-165 ။ Doi: 10.1016 / s0140-6736 (12) 60520-0
4 ။ Stoléru S က, et al Grégoire MC, Gerard: D, Decety J ကို, Lafarge အီး။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ (1999) Neuroanatomical Correlate ။ arc လိင်ပြုမူနေ 28: 1-21 ။
5. Redouté J, Stoléru S, Grégoire MC, Costes N, Cinotti L, et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (2000) ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦး နှောက်မြေပုံ 11: 162-177 ။ Doi: 10.1002 / 1097-0193 (200011) 11:3<162 :: အကူအညီ -hbm30> 3.0.co; 2- တစ်
6 ။ Arnow BA, Desmond je, Banner ll, ဂလိုဗာ GH, ရှောလမုန်တစ်ဦးက, et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက် (2002) ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက် 125: 1014-1023 ။ Doi: 10.1093 / ဦးနှောက် / awf108
7 ။ Ferretti တစ်ဦးက, Caulo M က, et al Del Gratta ကို C, Di Matteo R ကို, Merla တစ်ဦး။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ (2005) Dynamics ကို: fMRI အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဦးနှောက်ကို Activation ၏ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကို။ Neuroimage 26: 1086-1096 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2005.03.025
8 ။ et al Montorsi က F, Perani: D, Anchisi: D, Salonia တစ်ဦးက, Scifo P ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်း (2003) Apomorphine-သွေးဆောင်ဦးနှောက်မော်ဂျူ: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအလယ်ပိုင်းဖြစ်ရပ်မှာအသစ်တခုကိုကြည့်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 15 (3): 203-209 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3900999
9 ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်း Borg က C, de Jong က PJ, Georgiadis JR (2012) Subcortical BOLD တုံ့ပြန်မှုအမျိုးသမီးတွေအတွက်သွယ်ဝိုက် porn အသင်းအဖွဲ့များ၏ function ကိုအဖြစ်ခြားနားသည်။ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ Doi: 10.1093 / စကင် / nss117 ။
10 ။ Bocher M က, Chisin R ကို, Parag Y ကို, ဖရီးမနျး N ကို, Meir Weil Y ကို, et al ။ လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦး 2001O-H15O ပေလေ့လာမှု: တစ်ညစ်ညမ်းကလစ်တုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆက်စပ် (2) ဦးနှောက်ကို Activation ။ Neuroimage 14: 105-117 ။ Doi: 10.1006 / nimg.2001.0794
11 ။ Cera N ကို, Di Pierro ED, Sepede, G, Gambi က F, Perrucci MG, et al ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၌ကျန်ကြွင်းသာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ (2012) အခန်းကဏ္ဍ: fMRI အားဖြင့်ထင်ရှားကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများဒိုင်းနမစ်။ အဆိုပါဂျာနယ်ကလိင်။ Med ။ 9: 1602-1612 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02719.x
12 ။ Functional MR Spectroscopy အသုံးပြုခြင်းကျန်းမာရေးအမျိုးသမီးများအတွက် Visual လိင်စိတ်ကြွဆေးစဉ်အတွင်းဦးနှောက် Metabolites ပြောင်းလဲမှု၏ Kim က TH, Kang ဟောင်ကောင်, Jeong GW (2013) အကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ 10 ၏ဂျာနယ်: 1001-1011 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12057
13 ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမသိ Self-စည်းမျဉ်း၏ Beauregard M က, Lévesque J ကို, Bourgouin P ကို ​​(2001) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု။ J ကို neuroscience 21 (18): RC165 ။
14 ။ Mouras H ကို, Stoléru S က, Bittoun J ကို, Glutron: D, Pélégrini-Issac M က, et al ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (2003) ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage 20 (2): 855-869 ။ Doi: 10.1016 / s1053-8119 (03) 00408-7
15 ။ Karama S က, et al Lecours AR, Leroux JM, Bourgouin P ကို, Beaudoin, G, ။ ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ၏ (2002) ဒေသများ။ Hum ဦးနှောက်မြေပုံ 16 (1): 1-13 ။ Doi: 10.1002 / hbm.10014.abs
16 ။ Hamann က S, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန်ငွေကျပ် (2004) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ သဘာဝတရားမှ neuroscience7(4): 411-416 ။ Doi: 10.1038 / nn1208
17 ။ Holstege, G, Georgiadis JR, Paans လေး, Meiners LC, ဗန် der Graaf FH, et al ။ လူ့အထီးသုတ်ရည်လွှတ်စဉ်အတွင်း (2003) ဦးနှောက်ကို Activation ။ J.Neurosci 23 (27): 9185-9193 ။
18 ။ Georgiadis JR, Farrell MJ, Boessen R ကို, ဒဲ DA, Gavrilescu M က, et al ။ ဂေဟစနစ်တရားဝင်မှုနှင့်အတူအထီးလိင်ဆက်ဆံခြင်း (2010) Dynamic subcortical သွေးစီးဆင်းမှု: တစ် perfusion fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage 50: 208-216 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2009.12.034
19 ။ Cera N ကို, Delli Pizzi S က, Di Pierro ED, Gambi က F, Tartaro တစ်ဦးက, et al ။ Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက် Subcortical gray matter ၏ (2012) Macrostructural ALTER ။ PLoS ONE7(6): e39118 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0039118
20 ။ Hasson ဦး, NIR Y ကို, Levy ငါ Fuhrmann, G, Malach R ကို (2004) ကသဘာဝရူပါရုံကိုစဉ်အတွင်း cortical လှုပ်ရှားမှု Intersubject ထပ်တူ။ သိပ္ပံ 303 (5664): 1634-1640 ။ Doi: 10.1126 / science.1089506
21 ။ Pamilo S က, Malinen S က, et al Hlushchuk Y ကို, Seppä M က, Tikka P ကို။ ရုပ်ရှင်ရုံကြည့်ရှုစဉ်တွင်းကောက်ခံ fMRI ဒေတာများ၏အုပ်စု-နှင့် ICA ရလဒ်များ၏ (2012) Functional Subdivision ။ PLoS ONE7(7): e42000 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0042000
22 ။ Bordier ကို C, Puja က F, Macaluso အီး (2013) အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း: Computer မော်ဒယ်နှင့် functional neuroimaging ။ Neuroimage 67: 213-226 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2012.11.031
23 ။ Friston KJ, Holmes က AP, Poline JB, Grasby PJ, Williams က SC, et al ။ revisited fMRI အချိန်-series တွေရဲ့ (1995) အားသုံးသပ်ခြင်း။ Neuroimage2(1): 45-53 ။ Doi: 10.1006 / nimg.1995.1007
24 ။ et al Esposito က F, Scarabino T က, Hyvarinen တစ်ဦးက, Himberg J ကို, Formisano အီး။ Self-စည်းရုံးရေး Cluster အားဖြင့် fMRI အုပ်စုတစ်စုလေ့လာမှု (2005) လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Neuroimage 25: 193-205 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2004.10.042
25 ။ Fox က MD, Snyder AZ, ဗင်းဆင့် JL, Corbetta M က, ဗန်အက်ဆင်း, DC, et al ။ (2005) လူ့ဦးနှောက်ကိုစရိုက်ပြောင်းလဲနေသော, anticorrelated အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များသို့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 102: 9673-9678 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0504136102
26 ။ Raichle ME, MacLeod လေး, Snyder AZ, လုပ်ပိုင်ခွင့်များ WJ, Gusnard DA, et al ။ ဦးနှောက် function ကို၏ (2001) တစ်ဦးက default mode ကို။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 98 (2): 676-82 ။ Doi: 10.1073 / pnas.98.2.676
27 ။ Damoiseaux JS, Rombouts လုပ် SA, Barkhof က F, Scheltens P ကို, Stam CJ, et al ။ ကျန်းမာဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး (2006) ညီငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ကွန်ရက်များ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 103 (37): 13848-13853 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0601417103
28 ။ de Lucas က M, Beckmann CF, de စတီဖာနို N ကို, Matthews ကလေး, စမစ်သည် SM (2006) fMRI ပြည်နယ်ကွန်ရက်များအနားယူလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာခရီးဝေး interaction က၏ကွဲပြား Modes သာသတ်မှတ်။ Neuroimage 29: 1359-1367 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2005.08.035
29 ။ Corbetta M က, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-မောင်းနှင်အာရုံစိုက်မှု၏ Shulman GL (2002) ထိန်းချုပ်ရေး။ နတ်ဗြာ neuroscience ။3(3): 201-15 ။ Doi: 10.1038 / nrn755
30 ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက် Greicius M (2008) နားခိုရာ-ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု။ Curr Opin Neurol ။ 21 (4): 424-430 ။ Doi: 10.1097 / wco.0b013e328306f2c5
31 ။ Seeley WW, Menon V ကို, Schatzberg AF, Keller J ကို, ဂလိုဗာ GH, et al ။ salience အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် (2007) Dissociable အခ်ါဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များ။ J ကို neuroscience ။ 27 (9): 2349-2356 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.5587-06.2007
32 ။ Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavs J ကို, et al ။ (1998) က Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 59: 22-33 ။ Doi: 10.1016 / s0924-9338 (97) 83296-8
33 ။ Xu J ကို, Mendrek တစ်ဦးက, Cohen ကိုက MS, Monterosso J ကိုရှိမုနျက S, et al ။ အဆိုပါ Stroop တာဝန်ဖျော်ဖြေမဟုတ်တဲ့ဆုံးရှုံးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် prefrontal cortical function ကိုအပေါ်စီးကရက်ဆေးလိပ်၏ (2007) Effect ။ Neuropsychopharmacology 32: 1421-1428 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301272
34 ။ ရို RC, Riley တစ်ဦးက, Wagner, G, Osterloh ih, ပက်ထရစ် J ကို, et al ။ (1997) Erectile ရာထူးအမည် (IIEF) ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်း: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကဲဖြတ်များအတွက် multidimensional စကေး။ Urology 49: 822-830 ။ Doi: 10.1016 / s0090-4295 (97) 00238-0
35 ။ hoon EF, hoon PW, Wincze JP (1976) အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏တိုင်းတာခြင်းဘို့တစ်ခုစာရင်း။ 5-291: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 300 ၏မော်ကွန်း။ Doi: 10.1007 / bf01542081
36 ။ hoon EF, Chambless: D (1986) လိင်စိတ်နိုးထ Inventory (SAI) နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ Inventory-Expanded (SAI-E) ။ ခုနှစ်တွင်: Davis က CM, Yaber WL, အယ်ဒီတာများ။ လိင်-Related ဆောင်ရွက်ချက်များမြား: A Compendium ။ ဆိုင်းရာကူစ်း, နယူးယော့: ဂရပ်ဖစ်ထုတ်ဝေရေး Co. ,
37 ။ Derogatis LR (1977) က SCL-90R လက်စွဲစာအုပ်။ ကျွန်မ: အမှတ်ပေး။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် SCL-90R များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ Baltimore ။ MD: လက်တွေ့ Psychometrics ။
38 ။ Spielberg က C, Gorsuch RL, Lushene RE (1970) ကအစိုးရပိုင်ရိုစိုးရိမ်စိတ်စာရင်း။ Palo Alto, CA: စိတျပညာစာနယ်ဇင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။
39 ။ Carver က S, အဖြူရောင် T က (1994) အပြုအမူတားစီး, အမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ခါနီးဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်မှထိခိုက်စေတုံ့ပြန်မှု: အ bis / BAS အကြေး။ 67-319: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ 333 ၏ဂျာနယ်။ Doi: 10.1037 // 0022-3514.67.2.319
40 ။ အကြောင်းအရာအတွက်လိုက်ဖက်ရုပ်ရှင်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်း Koukounas အီး, ကျော် R ကို (1997) အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထ။ Aust ။ ဂျေ Psychol 49: 1-5 ။ Doi: 10.1080 / 00049539708259843
41 ။ Friston KJ, Williams က Howard R ကို, Frackowiak RSJ, fMRI အချိန်စီးရီးအတွက် Turner R ကို (1996) လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးများ။ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ Med 35: 346-355 ။ Doi: 10.1002 / mrm.1910350312
42 ။ Hajnal ဖက်စပ်, Myers R ကို, Oatridge တစ်ဦးက, Schwieso je, လူငယ်တို့မှာ IR, et al ။ ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အတွက်ဆက်စပ်ရွေ့လျားမှု stimulus ကြောင့် (1994) ရှေးဟောင်းပစ္စည်း။ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ Med 31: 283-291 ။ Doi: 10.1002 / mrm.1910310307
43 ။ Talairach J ကို, Tournoux P ကို ​​(1988) လူ့ဦးနှောက်၏ Coplanar Stereotaxic Atlas ။ နယူးယောက်: Thieme ။
44 ။ Weissenbacher တစ်ဦးက, et al Kasess ကို C, Gerstl က F, Lanzenberger R ကိုတခုအီး။ (2009) ဆက်စပ်မှုနှင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု MRI အတွက် anticorrelations: preprocessing မဟာဗျူဟာ၏အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ Neuroimage 47 (4): 1408-1416 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2009.05.005
45 ။ Hyvarinen တစ်ဦးက (1999) လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်မြန်ခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင် fixed-အမှတ် algorithms ။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Netw 10: 626-634 ။ Doi: 10.1109 / 72.761722
46 ။ Mantini: D, လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာပြည်နယ်ကွန်ရက်များအနားယူ၏ Perrucci MG, Del Gratta ကို C, Romani GL, Corbetta M (2007) Electrophysiological လက်မှတ်ပေါင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 104 (32): 13170-13175 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0700668104
47 ။ Mantini: D, Corbetta M က, Perrucci MG, Romani GL, Del Gratta ကို C (2009) အကြီးစားဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းနေစဉ်အတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့ယာယီလှုပ်ရှားမှုအတွက်အကောင့်။ Neuroimage 44: 265-274 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2008.08.019
48 ။ Liao W က, ချန် H ကို, et al Feng တို့က Y, Mantini: D, Gentili ကို C ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက်ပြည်နယ်ကွန်ရက်များအနားယူ၏ (2010) ရွေးချယ်ထစ်အငေါ့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု။ Neuroimage 52 (4): 1549-1558 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2010.05.010
49 ။ Forman SD, Cohen ကို JD, Fitzgerald က M, Eddy WF, Mintun, MA, et al ။ တစ်စပျစ်သီးပြွတ်-size ကိုတံခါးခုံကိုအသုံးပြုခြင်း: (1995) အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) တွင်သိသာထင်ရှားသော activation ၏အကဲဖြတ်တိုးတက်လာသော။ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ Med 33: 636-647 ။ Doi: 10.1002 / mrm.1910330508
50 ။ Beckmann CF, DeLuca က M, Devlin JT, စမစ်သည် SM (2005) လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 360: 1001-1013 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2005.1634
51 ။ Buckner RL, Andrews က-Hanna JR, Schacter DL (2008) ကဦးနှောက်ရဲ့ default အနေနဲ့ကွန်ယက်ကို: ခန္ဓာဗေဒ, function ကိုများနှင့်ရောဂါဆက်စပ်မှု။ ရာဇဝင်နယူးယော့ Ac သိပ္ပံ။ 1124: 1-38 ။ Doi: 10.1196 / annals.1440.011
et al 52. Shulman GL, Corbetta M, Fiez JA, Buckner RL, Miezin FM ။ (၁၉၉၇) အလုပ်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရှာဖွေခြင်း။ လူ့ ဦး နှောက်မြေပုံ ၅: ၃၁၇-၃၂၂ ။ Doi: 1997 / (sici) 5-317 (322) 10.1002: 1097 <0193 :: အကူအညီ -hbm1997> 5.co;4မီတာ
53 ။ Sridharan: D, Levitin DJ သမား, Menon V ကို (2008) ဗဟို-Executive နဲ့ default-mode ကိုကွန်ရက်များအကြား switching အတွက်ညာဘက်နံရံပစ်ကစားနည်း-နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 105 (34) ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု: 12569-12574 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0800005105
54 ။ Fransson P ကို, Marrelec, G (2008) က precuneus / posterior cingulate cortex ကို default mode ကိုကွန်ယက်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ: တစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုကွန်ယက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှအထောက်အထား။ Neuroimage 42 (3): 1178-1184 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2008.05.059
55 ။ Laird AR, Eickhoff SB, et al လီ K ကိုရော်ဘင် DA, Glahn DC က။ (2009) ကိုသြဒိနိတ်-based Meta-သရုပ်ခွဲမော်ဒယ်သုံးပြီး default အ mode ကိုကွန်ယက်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 29 ၏ဂျာနယ် (46): 14496-14505 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.4004-09.2009
56 ။ Fossati P ကို, et al Hevenor SJ, Lepage M က, ဂရေဟမ် SJ, Grady ကို C ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို-encoded အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏အောင်မြင်သောပြန်လည်ရယူခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်: (2004) Episode မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကို Distributed ။ Neuroimage 22: 1596-1604 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2004.03.034
57 ။ Moulier V ကို, Mouras H ကို, Pélégrini-Issac et al M က, Glutron: D, Rouxel R ကို။ လူ့ယောက်ျားအတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked penile စိုက်ထူ၏ (2006) Neuroanatomical Correlate ။ Neuroimage 33: 689-699 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2006.06.037
58 ။ Walter က M, Bermpohl က F, Mouras H ကို, Schiltz K ကို Tempelmann ကို C, et al ။ (2008) ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း fMRI-subcortical နှင့် cortical arousal အတွက်တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အထွေထွေစိတ်ခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများကွဲပြားခြားနားသွား။ Neuroimage 40: 1482-1494 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2008.01.040
59 ။ Buckner RL, Carroll, DC (2007) ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများနှင့်ဦးနှောက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ 11: 49-57 ။ Doi: 10.1016 / j.tics.2006.11.004
60 ။ Felician အို Ceccaldi M က, Didic M က, Thinus-Blanc ကို C, ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှလက်ညှိုးထိုးပြပြီး Poncet M (2003): နှစ်ဆ dissociation လေ့လာမှု။ Neuropsychologia ။ 41 (10): 1307-1316 ။ Doi: 10.1016 / s0028-3932 (03) 00046-0
61 ။ ပတ္တမြား P ကိုသင်သူတို့ယုံကြည်ထင်သောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်ယုံကြည်ကဘာလဲ Decety J ကို (2003): အယူအဆရေးရာရှုထောင့်-ဆည်းပူးနေတဲ့ neuroimaging လေ့လာမှု။ ဥရောပ J ကို neuroscience ။ 17: 2475-2480 ။ Doi: 10.1046 / j.1460-9568.2003.02673.x
62 ။ Decety J ကို (1996) စိတ်ကူး Do နှင့်ကွပ်မျက်ခံရလုပ်ရပ်များအတူတူပင်အာရုံကြောအလွှာ share? ဦးနှောက် Res ။ Cogn ။ ဦးနှောက် Res ။ 3: 87-93 ။ Doi: 10.1016 / 0926-6410 (95) 00033-x
63 ။ visceral အာရုံ၏ Aziz ကမေး, Schnitzler တစ်ဦးက, Enck P ကို ​​(2000) Functional neuroimaging ။ J ကို Clin Neurophysiol 17: 604-612 ။ Doi: 10.1097 / 00004691-200011000-00006
64 ။ Liotti M က, Brannan S က, Egan, G, et al အရိပ် R ကို, က Madden L ကို။ အသက်ရှူ၏ဝိညာဏ် (လေထုငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု) နဲ့ဆက်နွယ် (2001) ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 98: 2035-2040 ။ Doi: 10.1073 / pnas.98.4.2035
65 ။ Critchley HD ကို Corfield DR, Chandler အမတ်, Mathias CJ, Dolan RJ (2000) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ arousal ၏နှောက်ဆက်စပ်မှု: လူသားတစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging စုံစမ်းစစ်ဆေး။ J ကို Physiol ။ 523: 259-270 ။ Doi: 10.1111 / j.1469-7793.2000.t01-1-00259.x
66 ။ et al Leutmezer က F, Serles W က, Bacher J ကို, Gröppel, G, Pataraia အီး။ ရှုပ်ထွေးသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိမ်းယူမှုများတွင် (1999) အင်္ဂါအလိုအလြောကျ။ အာရုံကြော 52: 1188-1191 ။ Doi: 10.1212 / wnl.52.6.1188
67 ။ Abler B, Seeringer တစ်ဦးက, Hartmann တစ်ဦးက, Grön, G, Metzger ကို C, et al ။ subchronic paroxetine နှင့် bupropion အောက်တွင်ကျန်းမာယောက်ျားအပေါ်တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled fMRI လေ့လာမှု: (2011) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောလက္ခဏာ-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuropsychopharm ။ 36: 1837-1847 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.66